पल शाह र उनको बहिनिले आमाको मुख हेर्दै गरेको भिडियो अहिले एकदमै भाइरल भैरहेको छ । अहिले पल शाह कारागारमा भएपनि बहिनेले भने पल शाहको सम्झनालाई पनि समेटि आमाको मुख हेरेकि छिन् । गत वर्ष पल शाह र बहिनीले मातातिर्थमा बनाएको भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा भिडियो सामाग्री राखेका छौं । केहिदिन अगाडि जिल्ला अदालत भित्र पल शाह र पी*डित भनिएकी नाबालिका र केहि साक्षीहरू आएका थिए। पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताले पल शाहले कहिले सम्म सफाई पाउँछन् भन्ने बारेमा सोधिएको थियो। बिहिबार गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको बक पत्र सकिएको थियो । पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले लाई भित्र के भयो भनेर सोध्दा यसो भनियो,’ पल शाहको के*शको प्रमाण हरु बुझ्ने काम भइरहेको छ जसमा चै जाहिर वालाको सुरुमा बकपत्र भयो त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनु*सन्धानका क्रममा रहनुभएका तीन जन
नायिका सुहाना थापाले मा’ फी मागेपछि…
काठमाडौँ । ‘ए मेरो हजुर ३’ र ‘ए मेरो हजुर ४’मा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी नायिका हुन् सुहाना थापा । अभिनेत्री झरना थापाको निर्देशनमा तयार भएको फिल्ममा अनमोल र सुहानाको जोडीलाई दर्शक रुचाए । कृष्ण भगवान माथी आस्था राख्ने सुहाना शान्त स्वभावकी छिन् । आँफुले वा आफ्नो टिमकले भुलवश कुनै गल्ती गरेमा शान्त तरिकाले आफ्ना कुरा राख्ने सुहानाले हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक स्टोरीमा लामो चिठ्ठी लेख्दै यौनिक अल्पसङ्ख्यकसँग माफी मागेकी छिन्। सुहानाले यौनिक अल्पसंख्यकलाई मजाकको विषय बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नभएको कुरा राख्दै अन्जानमा त्यस्तो हुन गएकोमा माफी मागेकी हुन् । ‘ए मेरो हजुर २’ र ‘३’ मा समलिंगी पात्रलाई चित्रण गरिएको उदाहरण दिँदै उनले गल्ती भएको र आगामी फिल्ममा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने वाचा गरेकी छिन् । फिल्म सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माता सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् ।-ता
पल शाह प्रकरणमा यसघिको अन्तर्वार्ताका क्रममा बोल्दै चर्चित अभियन्ता सर्मिला वाइबाले भन्दै थिइन् कि दुर्गेश एक नम्बरको फ’टाह हो।तर आज उनै सर्मिला वाइबा गोल्डेन टीभीसँग कुरा गर्दै भनिन्,कि दुर्गेश भोलिको दिनमा र आज पनि यो समाजको हिरो हो।हिजो उनै दुर्गेश थापालाई उनले मु’र्दा’वाद समेत भनेकी थिइन्। उनले भनिन्,”पल शाह भोलि छुटेर आएको दिन आजको दिनमा महिला कर्मी तथा अभियन्ता मानिएका जो जति पनि आइमाईहरू छन् म कसैलाई पनि छोड्दिन।त्यीनै महिलाले अधिकारका नाममा उचालेका कारण आज यो दिन देखा परेको हो।” उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्,”जसले पल शाहलाई फसाउनको लागि षड्यन्त्र गर्‍यो नि त्यसलाई भोलि आ’गो लगाउनुपर्छ।पहिला ब’ला त्का’र’को आरोप लगाएर जे’ल”मा लगाउने अनि बयान फेर्ने त्यो पनि पलको समर्थकहरू देखेर बिहे गर्ने शर्तमा भनेर।यस्तो पनि हुन्छ ? पल आफैं दुई महिनादेखि जेलमा छ।” हिजोको दिनमा धेरैजना हिरोनीहर
काठमाडौं-आज नायिका वर्षा सिवाकोटीको बिवाह सम्पन्न भएको छ । उनको अमेरिका बस्दै आएका प्रेमी आशिष गेलालसँग बिवाह भएको हो । विवाहलाई गोप्य राखेकी वर्षाका बिहेका तस्विर भने सार्वजनिक भएका छन् । टिकटकबाट चर्चामा आएका जुम्ल्याहा दिदी बहिनी प्रिज्मा पिन्सी आशिषको तर्फबाट जन्ती गएको बताइएको छ । विवाहमा सरिक प्रिजमाले इन्ट्राग्राममा बेहुलासँगको स्टोरी पोष्ट गरेकी छिन । विवाहमा दुवै परिवारका आफन्त र परिवारका सदस्य मात्र उपस्थित भएका थिए । वर्षाका जीवनसाथी आशिष इन्जियिनर हुन् । उनको घर नेपालमा बालुवाटारमा रहेको बताइएको छ । गोप्य रुपमा भइरहेको बिबाह राजधानीकै एक भिल्लामा भएको हो । विवाह समारोहमा परिवारका सदस्य, सीमित आफन्त र साथीहरु गरी १५० जनाको उपस्थिति रहेको वर्षानिकट स्रोतले जनाएको छ । वर्षाको यस अघि राज कटुवालसँग नाम जोडिएको थियो । यद्यपी उनी साथी मात्रै रहेको बुmिभएको छ । यस अघि नायिका
गायिका मेलिना राईले गरिन् इन्गे जमेन्ट, कोसँग ग र्दैछिन् विवाह ?
काठमाडौं । गायिका मेलिना राई विवाहको तयारीमा रहेकी छन् । गायिका राईले सञ्जिव बराइलीसँगको तस्वीर सेयर गर्दै विवाहको तयारीमा रहेको जानकारी गराएकी हुन् । गायिका राईले सामाजिक सञ्जालमा सञ्जिवसँगको तस्वीर सेयर गर्दै इन्गेजमेन्ट पनि भइसकेको जानकारी गराएकी छन् । दुई वर्ष अगाडि नै मेलिना र सञ्जिवले इन्गेजमेन्ट गरेको खबर बाहिरिएको छ । यसैबर्ष उनीहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छन् । विर्तामोड घर भएका सञ्जिव गिटारिस्ट तथा कम्पोजर हुन् । यो पनि.. नायिका पुजाले खु, लाइन आफुले युद्ध बानिया रोज्नुको कारण,यस्तो रोचक रहेछ पुजाको प्रेम क हानी (भिडियो हेर्नुस्) भर्खै बजारमा आएको नथिया म्युजिक भिडियोले राम्रो व्यापार गरे संगै नायिका तथा निर्मात्री पुजा शर्मा खुशीले फुरुंग छिन् ।उनी एति खुसी भइन कि पुजा शर्माले लामो समय देखी लुकाएर राखेकी आफ्नो प्रेमी पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् । सुरुमा पल धेरै
नायिका पुजाले खु, लाइन आफुले युद्ध बानिया रोज्नुको कारण,यस्तो रोचक रहेछ पुजाको प्रेम क हानी (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खै बजारमा आएको नथिया म्युजिक भिडियोले राम्रो व्यापार गरे संगै नायिका तथा निर्मात्री पुजा शर्मा खुशीले फुरुंग छिन् ।उनी एति खुसी भइन कि पुजा शर्माले लामो समय देखी लुकाएर राखेकी आफ्नो प्रेमी पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् । सुरुमा पल धेरै राम्रो मान्छे हो कसरी एस्तो भयो भन्दै रुदै कुरा गरिरहदा पछिल्लो समय फिल्म ले निकैनै राम्रो व्यापार गरि रहदा खुसिले फुरुङ भै रहदा आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रेमी युद्ध बानियाँसँगका तस्बिरहरू सेयर गर्दै उनले प्रेमबारे खुलेर खुलासा गरेकी हुन् । यसअघि धेरै चर्चा भै रहदा पनि यो कुरालाइ लुकाएकी थिइन। तर अहिले पछिल्लो समय फिल्मको हरेक शो हरुमा युद्ध पुजा संगै देखिने गरेका छन् । बिस्तारै यो जोडी बिबाहमा परिणत गर्ने योजना बनायेका छन। उनका प्रेमी हेटौंडाका निर्माण व्यावसायी रहेका छन् । उनी शारीरिक रुपमा एकदमै फिट पनि रहेका छन । भर्खरे उनले अभिनय गरेक